मार्क्वेट पार्क • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउनस्टाइलको घर मा सबै चीजको लागि स्वागत छ मार्क्वेट पार्क। हामी तपाईंलाई पार्कमा हुने सबै कुरामा अद्यावधिक राख्नेछौं, मार्क्वेट मनोरन्जन केन्द्र, फिल्ड हाउस, र मा थॉमस डन लर्निंग सेन्टर.
डचटाउनको उत्तरी भागमा अवस्थित, मार्क्वेट पार्क १ 17 एकडमा ओसेज र गैसकोनेड स्ट्रीटहरू बीच कम्प्टन एभिन्यूमा घुम्छ। यो ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो पार्क हो। पार्क सन् १ 1915 १। मा शरणार्थी अनाथालयको पूर्व सदनको साइटमा स्थापित भएको थियो।
मार्केट पार्कमा के हुँदैछ?
We भर्खरै हाइलाइट गरियो अद्भुत समुदाय संचालित गतिविधिहरु र घटनाहरु Marquette पार्क मा भइरहेको केहि। हामीले धेरै चुनौतीहरुको सामना पनि गरेका छौं, जसको बारेमा हामी छलफल पनि गर्दछौं। तर प्रगति भइरहेको छ, र २०२१ को गर्मी मार्क्वेट पार्क मा एक महान समय भएको छ। हाम्रो लेख पढ्नुहोस् DutchtownSTL ब्लगमा।
Marquette पार्क सुविधाहरु र सुविधाहरु
मार्क्वेट पार्क पोखरी
मार्क्वेट पार्क दक्षिण पक्षको सबैभन्दा ठूलो आउटडोर सार्वजनिक पौंडी पोखरीको घर हो। २०१ pool को गर्मीमा पूल नविकरण गरियो र फेरि खोलियो। हालसालै, मार्क्वेट पार्कको सहयोगी, एक समूह सम्बद्ध DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, छ पोखरीमा नयाँ फर्निचरको लागि $ 7,000 बढाइयो। उनीहरूले शहरका अधिकारीहरूलाई पनि स्वागतयोग्य वातावरणलाई प्रबर्द्धन गर्न पोखरी वरपरको बारबाट तारहरू हटाउन लोबिड गरेका छन्।
फुटबल मार्क्वेट पार्कमा
एक पूर्ण आकार को फुटबल क्षेत्र पार्क को पश्चिमी भाग ओगट्छ। सप्ताहन्तमा, संसारका कुनाकाबाट खेलाडीहरूको ठूलो समूहले केही अनौपचारिक प्रतिस्पर्धाको लागि मैदान लिन्छ। गिरावटको अवधिमा, सिटी रेक लीगले छिमेकी युवाहरूका लागि फुटबल कार्यक्रमहरू संचालन गर्दछ। मार्क्वेट पार्कका सहयोगीहरूले फुटबल सुविधाको गुणस्तर सुधार गर्न साझेदारी विकास गर्न काम गरिरहेका छन् मार्क्वेट पार्कमा फुटबलको प्रचार गर्नुहोस्.
मार्क्वेट पार्क क्षेत्र हाउस
भर्खरको मर्मत गरिएको, ऐतिहासिक मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउस पार्कको पश्चिमी भागको एउटा डाँडामा बसालिएको छ। सेन्ट लुइस पार्क पार्क मा कल गरेर फिल्ड हाउस घटनाहरूका लागि भाडामा लिन सकिन्छ (314) 289-5300.
थॉमस डन लर्निंग सेन्टर
Gasconade र मिनेसोटा मा पार्क को दक्षिण पूर्व कुनामा अवस्थित छ, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर १ 1991 XNUMX १ मा पार्कमा स्थापना भएको थियो। थॉमस डनले सबै उमेरका लागि कक्षा र गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ, खुला कला स्टुडियो, प्रदर्शन भान्सा, पुस्तकालय, र कम्प्यूटर प्रयोगशालाको प्रस्ताव। तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ थॉमस डन लर्निंग सेन्टरमा कक्षा र घटनाहरू यहाँ DutchtownSTL.org मा छ।
मार्क्वेट मनोरन्जन केन्द्र
मार्क्वेट रिक सेन्टर, मिनेसोटा एवेन्यू सामना गर्ने पार्कको पूर्वपट्टि, बास्केटबल कोर्टहरूको एक इनडोर जिमको साथै पोखरीको लागि गतिविधि कोठा र लकर कोठा सुविधा रहेको छ। थॉमस डन लर्निंग सेन्टर र साउथ साइड युथ काउन्सिलले भर्खर द प्लेस खोल्न साझेदार गर्यो, रेक सेन्टरको माथिल्लो भागमा अवस्थित युवा ड्रप-इन सेन्टर।
माथी प्रस्तुत गरिएका सबै प्रस्तावहरु को अतिरिक्त, Marquette पार्क तीन टेनिस कोर्ट, एक सफ्टबल हीरा, र एक ठूलो खेल को मैदान सुविधाहरु। थप मनोरन्जन सुविधाहरु काम मा छन्। पार्कले विश्रामको लागि प्रशस्त ठाउँ पनि प्रदान गर्दछ, बेंचहरु परिधि र यसको १ acres एकड भर मा फराकिलो हरियो ठाउँ अस्तर संग। पहाड जसमा फील्ड हाउस बस्छ डचटाउन को शानदार दृश्यहरु प्रदान गर्दछ।
Marquette पार्क मा सामुदायिक घटनाक्रम
मार्क्वेट पार्कमा फिल्म रातहरू
गर्मी को समयमा, DT2 र अन्य प्रायोजकहरू ल्याउँछन् डचटाउन चलचित्र रातहरू २२ फुटको inflatable ठुलो स्क्रीनमा छिमेक परिवारलाई। सामुदायिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न, खाना टक्सबाट स्नैक्स लिन र अन्धकारमा परिवारमैत्री चलचित्र लिनका लागि छिमेकीहरू फील्ड हाउसको अगाडि पहाडको चारैतिर फैलिए।
डचटाउन चलचित्र नाइट्सको बारेमा अधिक जानकारीको लागि पार्कमा र अन्य ठाउँहरूमा dutchtownstl.org/movienight.
साझा ध्वनि महोत्सव
डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन प्रत्येक शरद parkतुमा पार्कमा साझा ध्वनि महोत्सव होस्ट गर्दछ। महोत्सव मा संसार भर बाट संगीत र नृत्य, खाद्य र विक्रेताहरु को साथ चारै ओर बाट ल्याईएको छ। वार्षिक उत्सवमा ब्लक पार्टी वातावरण हुन्छ, पार्कको बीचमा कम्पटन एभिन्यू बन्द गर्दछ।
मार्क्वेट समुदाय दिवस
हरेक गर्मी मार्क्वेट समुदाय दिवस मार्क्वेट पार्क मा एक रोमाञ्चक ब्याक-टू-स्कूल कार्यक्रम होस्ट गर्दछ, ब्याकप्याक्स, स्कूल आपूर्ति, कपाल काट्ने, र अधिक साउथ साइड बच्चाहरु लाई नयाँ स्कूल बर्ष को लागी तयार पार्न को लागी। घटना पनि बाउन्स महल, घोडा सवारी, प्रत्यक्ष संगीत, र बारबेक्यू संग रमाईलो को धेरै प्रदान गर्दछ। Marquette को बारे मा सबै पढ्नुहोस् हाम्रो ब्लग मा यहाँ सामुदायिक दिवस।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 26th, 2021 .
डचटाउन STL.org मार्क्वेट पार्क